ट्रम्प र किमको शिखर वार्तामा गोर्खाली प्रहरीले सुरक्षा दिने ! - Headline Nepal - Online News Portal from Nepal | Latest Nepal News from politics, sports, entertainment, society, world, technology, opinion, interview, Nepali movies, fashion, life style, tourism, international news, national news, economy, science, music, live news events, live sports events
ट्रम्प र किमको शिखर वार्तामा गोर्खाली प्रहरीले सुरक्षा दिने !
Posted by Headline Nepal | २२ जेष्ठ २०७५, मंगलवार १६:२९ |
२२ जेष्ठ, काठमाण्डौं । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाका नेता किम जोङ उनले सिंगापुरमा पहिलोपटक शिखर वार्ता गर्दा उनीहरूले गोर्खाली प्रहरीहरूले सुरक्षा दिने भएका छन् ।
त्यसो त दुवै नेताले व्यक्तिगत सुरक्षा टोलीहरू ल्याउनेछन् तर गोर्खालीसहितको सिंगापुर प्रहरीले वार्तास्थल, सडक र होटेलहरूको सुरक्षा दिनेछ ।
गोर्खालीहरूको उपस्थिति सिंगापुरमा छ तर उनीहरू बाहिर खासै देखिँदैनन् । गत सप्ताहान्तमा सांग्रिला होटलमा भएको सुरक्षा सम्मेलनलाई उनीहरूले सुरक्षा दिएका थिए ।
सिंगापुर प्रहरीले नेपालका पहाडहरूबाट गोर्खालीहरूलाई लिएर भर्ती गर्ने गर्छ । उनीहरू बडी आर्मर, बेल्जियममा बनेको एफएन एससीएआर कम्ब्याट असल्ट राइफल र लेग होल्स्टरमा पिस्तोल राखेर सम्मेलनमा तैनाथ देखिन्थे ।
सुरक्षाविज्ञहरूका अनुसार, अमेरिका र उत्तर कोरियाबीचको शिखर सम्मेलनको पूर्वतयारीस्वरूप उनीहरूलाई त्यहाँ खटाइएको थियो ।
अत्याधुनिक हतियार राख्ने भएपनि गोर्खालीहरू खुकुरीविना युद्धमा जाँदैनन् । परम्पराअनुसार, दापबाट खुकुरी झिकेपछि रगत नचुहाइकन फिर्ता राख्न हुँदैन ।
‘सिंगापुरले दिनसक्ने सुरक्षाका लागि उनीहरू सबभन्दा गतिला माध्यम हुन् र उनीहरू सम्मेलनमा पक्कै रहनेछन् जस्तो मलाई लाग्छ,’ इन्टरनेसनल इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक स्टडीजमा सिंगापुरका सशस्त्र बलविज्ञ टिम हक्सली बताउँछन् ।
‘उनीहरू महत्त्वपूर्ण र अग्रपंक्तिमा रहेका बल हुन् र यस्तो समारोहलाई सम्हाल्नका लागि गोर्खालीले विशेष तालिम लिएका हुन्छन्,’ उनले भने ।
सिंगापुर प्ररहीका एक प्रवक्ताले गोर्खालीहरूको तैनाथीका विषयमा केही बोलेनन् ।
लगभग १८ सय गोर्खालीहरू सिंगापुर प्रहरीमा रहेको आईआईएसएस मिलिटरी ब्यालेन्स बताउँछ ।
हक्सलीका अनुसार, गोर्खालीहरू सिंगापुरको नेतृत्वका लागि बहुमूल्य सम्पत्ति हुन् । जातीय विविधता भएको देशमा उनीहरू तटस्थ बलका रूपमा रहेका छन् । उनीहरूले भीआईपीलाई अनि दंगाको अवस्थामा सुरक्षा दिने गरेका
क्षेत्रीय तनाव भएका बेलामा उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यालयहरूको सुरक्षा गरेका थिए र मलेसिया–सिंगापुर सीमामा पनि तैनाथ देखिन्छन् ।
सिंगापुर प्रहरीको वेबसाइटले गोर्खालीहरूलाई ‘कठोर, जागरुक र दृढ’ बलका रूपमा वर्णन गरेको छ । उनीहरूले ‘सिंगापुरको सुरक्षाका लागि विभिन्न किसिमका प्यारामिलिटरी अपरेसनहरू गर्ने गरेको’ पनि लेखिएको छ ।
Previous‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ मा सघाउन अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन सकारात्मक !
Nextनेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा भारतमा घट्यो !
रोनाल्डोको एउटा फोटोका कारण विश्वभरीका बौद्धमार्गीहरू विरोधमा
६ कार्तिक २०७३, शनिबार ०४:५६
नेपोलीको ८ मिनेटभित्र ३ गोल
१३ आश्विन २०७३, बिहीबार १६:३८